Somaliland.Org » CODKAAGA KU CIIL BAX (19). TALO IYO TUSAALAYN KOMISHANKA DOORASHOOYINKA.
OPINIONCODKAAGA KU CIIL BAX (19). TALO IYO TUSAALAYN KOMISHANKA DOORASHOOYINKA.
October 27th, 2009 Comments Off “ CODKAAGA KU CIIL BAX (19). TALO IYO TUSAALAYN KOMISHANKA DOORASHOOYINKA.
Waa hanbalyo iyo bogaadin iyo dardaaran u socda komishanka cusub ee guddoon wacan. Hor iyo horaan waa komishan leysku raacay, cod aan waxba lagala hadhin lagu fooladeeyey, waxayna Wakiiladu u xidheen cumaamad ay hareero hayaan mucaafid iyo mucaaridba.
“ Waxaynu ognay in sharafta la huwiyey ka dhalatay tanaasulka labada xisbi ee KULMIYE iyo UCID, waaayo Madaxtooyadu umay yareysan inay khilaaf geliso oo isku-dhac ka bilaabmo magacaabida oon dhammaan. Waxay ahayd cimri dherar iyo dhooqayn xeeladaysan.Waa se leyka gartay. Komishankuna waa garan karaa sababta loogu sacbiyey, iyo danta weyn ee laga leeyahay.
Waxaynu ka warqabnaa sida xad-gudubka ah ee loo celiyey xubnihii mucaaridku hore u soo magacaabay, iyo xubinta Guurtida. Waa dulqaad kale iyo samir ay ku dheehantay lexjeclada dalka iyo qaranka ooy muujiyeen mucaaridku, kolkay iyagoo ka dheregsan sharci darrada loo celiyey xubnahaas haddana canduuftootii dib u liqay.
Kama aha jileec, kamana aha cabsi, kama aha karti la’aan, kamana aha garasho la’aan. Waa halkii labada dumar ah ee ilmaha isku qabsaday, tii dhashay iyo tu ku qabsatay. Deedna xaakimkii caadilka ahaa yidhi waan idiin kala goynayaa oo midba badh ayaan siinayaa, hooyadii oo naxariis is haysan weyday ayaa tidhi “ha kala jarin ee iyadu ha aqaadato ee sii”, waa tii aan dhalin tan ay leedahaya ha la siiyo.
Waxa xaakimku gartay cidda dhashay iyo inay hooyada dhabta ahi tahay tan taanaasulka samaysay.
Kaalintii xaakimka dadweynow idinkaa ku jira, maalinta aad xukunkan QAADAYSAANA WAA DHARAARTA CODBIXINTA, OOD CODKAAGA KU CIIL BAXDO. Dharaarta awoodda hoggaaminta dalku gacmahaaga ku soo noqonayso, dharaarta lagaa sugaayo inaad dacwaddan qaado, ood garato hooyada dhabta ah iyo cidda laxjeclada xaqooda ku waayey mar, laba iyo tobanaan jeer oo dhammaan xukunkaaga sugaaya.
Raad-raac ahaan maqaalkan ku qoran linka hoose ayaan kaga hadlay habka ansixinta iyo sida haboon ee loo soo xuli karo xubno tayo iyo daacad leh. Waxayna ahyd mid aan kaga hadlay doorashadaii komishankii hore. Cidii taas xisaynaysaa ha gujiso linkan hoose.